Apex Launcher ကိုအခမဲ့ | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » Apex Launcher ကို
Apex Launcher ကို APK ကို
Apex Launcher ကိုသင့်ရဲ့ Android (4.0 +) device ကိုအပေါ်တစ်ဦးစိတ်ကြိုက်ပင်မမျက်နှာပြင်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးကူညီပေးသည်။
"သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြည့်စုံပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများပေးကြဖို့အလားအလာရှိကြောင်း Fantastic app ကို။ ငါသည်အမြင့်မားကအကြံပြုလိုပါတယ်။ " - MakeUseOf
"တောင်မှစိတ်ကြိုက်အများကြီးပြီးနောက်, Apex Launcher ကိုစူပါအစာရှောင်ခြင်းခံစားရပါတယ်။ " - အခုတော့ Pocket
"ကျနော်တို့ကထောပတ်ကဲ့သို့ချောမွေ့ဆိုရပေမည်။ " - Droid ဘဝ
ငါးအကောင်းဆုံး Android အတွက် Launcher - Lifehacker
Ice Cream Sandwich များအတွက် 25 Tastiest Apps ကပ - PCMag
-ရှိရမည်က Nexus7များအတွက် apps များ - ZDNet
•စိတ်ကြိုက်ပင်မမျက်နှာပြင်ဇယားကွက်အရွယ်အစားနှင့်9homescreen အထိ
စာမျက်နှာနှုန်း7icon များဖွင့်ခြင်းနှင့်5စာမကျြနှာမှတက်နှင့်အတူ• Scrollable အထိုင်
• Infinite & elastic scrolling မ (ပင်မမျက်နှာပြင်, အံဆွဲများနှင့်အထိုင်)
• Fancy အကူးအပြောင်းသက်ရောက်မှု (စသည်တို့ကိုတက်ဘလက်, တုံး)
•ဝှက် element တွေကိုသင် (persistent ရှာဖွေရေးဘား, ပြ status bar, ဒါမှမဟုတ်ပင်အထိုင်) ချင်အဖြစ်
shortcuts တွေကိုနှင့်ဖိုင်တွဲများအဘို့စိတ်ကြိုက် icon များနှင့်တံဆိပ်များ•
•ကွဲပြားခြားနားသော folder ကို preview ကိုစတိုင်များနှင့်နောက်ခံကိုရွေးချယ်ပါ
•အကွိမျမြားစှာအံဆွဲစတိုင်များ (/ ပွင့်လင်းဒီလိုပါပဲ, ဒေါင်လိုက် / အလျားလိုက်, paginated / စဉ်ဆက်မပြတ်)
•အံဆွဲမီနူး (အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲကို install, ခေါင်းစဉ်) sorting apps
•အအံဆွဲထဲကနေဖျောက် apps များ
•မတော်တဆအပြောင်းအလဲများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သင်၏ desktop သော့ခတ်
•ပင်မမျက်နှာပြင်အမူအရာခံစားကြည့်ပါ (/ ကိုချင့်ပွတ်ဆွဲနှစ်ချက်ကိုထိပုတ်ပါ pinch)
•အဆင့်မြင့်ဆောင်ပုဒ်အင်ဂျင် (အိုင်ကွန်ထုပ်, အရေခွံ, etc)
• Backup ကို / restore setting များကိုနှင့်အချက်အလက်
•ဖုန်းများနှင့် tablet နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် Optimized
Apex Launcher ကို Pro ကို (Paid Version) Features:
အစွမ်းထက်အံဆွဲပြင်ဆင်မှုများ (န့်အသတ်အံဆွဲတဘ်များ, အံဆွဲထဲမှာဖိုလ်ဒါ) •
• (အခမဲ့ Apex Notifier extension ကိုပေး) မဖတ်ရသေးသည့်အရေအတွက်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ
•နောက်ထပ်အကူးအပြောင်းသက်ရောက်မှု (စသည်တို့ကိုအကော်ဒီယန်, လက်ဝါးကပ်တိုင်,)
• Flexible ဆောင်ပုဒ်ရွေးစရာများ (ADW, LauncherPro, Go ကိုဖွင့်တင် themes များ)
• Enhanced folder ကိုထောက်ခံမှု (အသုတ်ဖိုလ်ဒါပေါင်းစည်း, add)
• (Widgets တွေထပ်အထိုင်အတွက် Widgets တွေ,) အဆင့်မြင့် widget ကရွေးချယ်စရာ
•အလမ်းအပေါ်ပိုမို features တွေ!
• (ထိတွေ့လာသို့မဟုတ် HTC Sense သည်ကဲ့သို့) မျက်နှာပြင်စမ်းကြည့်ရှုရန်ဝင်ရောက်ဖို့ screen ကိုစုပါ။
• Long ကစာနယ်ဇင်း folder တစ်ခုဖန်တီးရန်နောက်ထပ်တချက်ကြောင့် drag and drop မှ icon တစ်ခု။
•အ Desktop ပေါ်မှာ Long ကစာနယ်ဇင်း icon များ / ဖိုလ်ဒါနဲ့ icon များနှင့်တံဆိပ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ပ်အပ် menu ကနေပြင်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ပါ။
•ဆွဲ, ပျံဝဲ, အလျင်အမြန် apps များ uninstall လုပ်ဖို့မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာဖျက်မှု button ကိုကျော် app ကို icon တွေကို drop ။
• Long ကစာနယ်ဇင်းလျင်မြန်စွာထို app ကိုဖွင့်ဖို့ဝှက် apps များစာရင်းထဲတွင် app တစ်ခု။
•နောက်ခံပုံများချဲ့ခြင်းကိစ္စများဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောမျက်နှာပြင်နောက်ခံပုံ mode ကိုမှပြောင်းလဲမည်။
• (က Android 4.0 သာ, အမြစ်လိုအပ်) ကိုအံဆွဲထဲကနေ Widgets တွေထည့်သွင်းဖို့အဆင့်မြင့်ဆက်တင်များတွင် Root ကူညီ Enable လုပ်ထားပါ။
• Access ကိုဝစ်ဂျက်ကိုဒေတာ: သာလျှင်ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ် Widgets တွေဖန်တီးပြသလေ့ရှိတယ်။ (က Android 4.1 + သာ)
•လျှောက်လွှာသတင်းအချက်အလက်: ကအခြား launchers အပြေးကြသောအခါသတိပေးချက်များဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။
•ထိန်းချုပ်ရေးတုန်ခါမှု / အဆင့်အတန်းဘား / Wallpaper: နျ Standard launcher လုပ်ဆောင်ချက်များကို။
•ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေး: အမည်မသိအသုံးပြုမှု / အမှားများအတွက်အသုံးပြု (optional) သတင်းပို့။
•ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ: သင်ပင်မမျက်နှာပြင်အပေါ်တိုက်ရိုက်-dial shortcuts တွေကိုဖန်တီးလာသောအခါအသုံးပြုသည်။
•သိုလှောင်မှု: settings ကိုနဲ့ Desktop data တွေကို restore / backup လုပ်ထားရန်အသုံးပြုသည်။
• SuperUser: အအံဆွဲ (သာ Android မှာ 4.0) မှ Widgets တွေထည့်သွင်းဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့။
Apex Launcher ကို Love? Google Play တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်။ ကျနော်တို့ကအမြဲပိုကောင်း Apex Launcher ကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ သငျသညျမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့နှင့်အတူဝေမျှကျေးဇူးပြုပြီး!
ပြသမှုအဖြစ် * Show ကိုရှာဖွေရေး
* အသုံးပြုနိုင်စွမ်းဝန်ဆောင်မှု (Lollipop အပေါ် TouchWiz) မှတဆင့်အကြောင်းကြားစာများနှင့်အမြန် settings ကို Expand
* အခြားတိုးတက်မှုများနှင့် bug ပြင်ဆင်ခြင်းများ
* Added ကာတာလ, Estonian အဘိဓါန်များနှင့်ပါရှဘာသာ
Apex Launcher ကို
4.70 ကို MB
ဇွန် 27, 2015
စူပါ P ကိုဖွင့်တင် ...
မတ်လ 22, 2018 မှာ 10: 15 ညနေ
ဇူလိုင်လ 4, 2017 မှာ 2: 22 ညနေ
ဝှက် apps များပြီးနောက်ငါ၏အ app များကိုကြည့်ရှုဖို့ကိုဘယ်လို
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2016 မှာ 4: 55 နံနက်
အသုံးပြုလွန်းလွယ်ကူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအလွန်သင့်ရဲ့ website မှာကြိုက်တယ်။ ဦးပိုပိုမိုလွယ်ကူစေလျှင်ဈ thenkful ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဦးရှိသမျှကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိ ...
Jyoti Prasad Nath says:
မတ်လ 6, 2015 မှာ 8: 22 ညနေ
အလွန် Nice လျှောက်လွှာ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2015 မှာ 8: 03 ညနေ
app များကိုအကြီးအ apps များ apk..very ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2014 မှာ 11: 04 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 27, 2014 မှာ 6: 13 ညနေ
ကျေးဇူးတင်စကား appsapk..you အလွန်ကြီးသောများမှာ
စက်တင်ဘာလ 20, 2014 မှာ 5: 03 ညနေ
ဟေး, ထ thumbs
ဇူလိုင်လ 14, 2014 မှာ 7: 11 နံနက်
ကောင်းတဲ့ ,, မြေအောက်ရထား surfers ဂိမ်း upload ကျေးဇူးပြုပြီး!
ဇွန်လ 21, 2014 မှာ 5: 14 နံနက်
karisan berkay says:
ဇွန်လ 17, 2014 မှာ 3: 21 ညနေ
ဇွန်လ 2, 2014 မှာ 10: 42 နံနက်
၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်အားလုံးဟာ android user တွေအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည် ... ငါသည်သင်တို့၏ web site ကိုသုံးပြီးပျော်မွေ့။
ဇွန်လ 24, 2014 မှာ 1: 58 ညနေ
ငါအရာသည်ဤ website ကိုအကောင်းပေမယ့်ကိုယ်သင်ဒီမှာကြီးတွေမြန်နှုန်းများအတွက်လိုအပ်ချက်နဲ့တူဂိမ်းများ, GTA, FIFA, PES, တန်ပြန်သပိတ်များနှင့် ... add ချင်တယ် ..
မေလ 8, 2014 မှာ 5: 32 ညနေ
ကိုယ့် website ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီလ 25, 2014 မှာ 9: 53 နံနက်
ဧပြီလ 1, 2014 မှာ 5: 34 ညနေ
ဦး .. အလွန်ကြင်နာ၏ဦး .. ဟာ android apps များရန်လွယ်ကူ access များအတွက် appsapk Love
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2014 မှာ 3: 57 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2014 မှာ 5: 08 ညနေ
hi, အလွန်ကောင်းသော, တင့်ကား။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2014 မှာ 10: 25 နံနက်
ဒီ site ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ် ...... ကိုယ်ကဒီ site ကိုကြိုက်တယ် ... တချို့ပြိုင်ကားဂိမ်းမကြာမှီကပြောင်းလဲမှုများ ... 4us
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2014 မှာ 8: 43 ညနေ
Micky Gh says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2013 မှာ 1: 36 ညနေ
အစပိုင်းမှာကိုယ်ကကိုယ့် dis site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်အထိ Gud apps များရရှိရန် dificult ... ဦး၏ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်အားလုံး app များကိုဒီနေရာမှာပိုပြီးအကျင့်ကိုကျင့် uu နည်းနည်းဖိုင် size..wish နှင့်အတူ ... ကောင်းတဲ့ app များကိုဖြစ်ကြသည်ကိုရှာပါ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2013 မှာ 11: 02 ညနေ
ဤမျှလောက် Micky ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂
နိုဝင်ဘာလ 9, 2013 မှာ 10: 02 နံနက်
ငါသည်ငါ့မှာ Android များအတွက်နီးပါးတစ်စုံတစ်ရာ ... နိုင်သလားအကြောင်းဤသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်, Awesome ကို Is ။
Nuwagaba တိုနီဘလဲ says:
သြဂုတ်လ 12, 2013 မှာ 3: 52 ညနေ
ကိုယ့်သင့်ရဲ့ website မှာသုံးပြီးပျော်မွေ့
ဇွန်လ 1, 2013 မှာ 6: 22 ညနေ
အသုံးပြုလွန်းလွယ်ကူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအလွန်သင့်ရဲ့ website မှာကြိုက်တယ်။ ဦးပိုပိုမိုလွယ်ကူစေလျှင်ဈ thenkful ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဦးရှိသမျှကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိ ... ။